युवतीको प्रयोग गर्दै यसरी गरिन्छ लुटपाट – हेर्नुस् भिडियो
मुलुकमा चोरी, लुट, बलात्कार, हत्या, हिंसा जघन्य अपराधहरु बढीहेको बेला त्यसै बिषयलाई ईङ्गित गर्दै ‘रोड’ नामक लघु चलचित्र सार्वजनिक गरिएको छ । मरिज लिम्बु युट्युव च्यानल मार्फत उक्त भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो ।
मरिजमान लिम्बुद्वारा लेखन, सम्पादन र निर्देशन गरिएको रोड मोवाईल क्यामेराबाट बनाईएको सर्ट मुभी हो । सडकमा दिनदहाडै युवतीको प्रयोग गरेर कसरी लुटपाट मच्चाईन्छ भन्ने जस्ता क्रियाकलापलाई मोवाईल क्यामेरामा उतार्दै यो भागलाई टुङ्ग्याईएको छ ।
पुनम गुरुङ, मुकुन्द दाहाल र अनिश गिरीको दमदार अभिनय रहेको लघु चलचित्र ‘रोड’को यो भिडियो हेर्नुहोस्
कबड्डी ३ बाट प्रदिप निक्लिएका कि निकालिएका ?
पूजाको ‘पोई पर्यो काले’ आकाश
‘दाल भात तरकारी’को ४ पोस्टरमा कोको छन ?
कपिल शर्माको शोमा यस कारण रिसाइन् आलिया